နွေကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ဘာလုပ်ကြမလဲ? » ICT.com.mm
ICT.com.mm > News > နွေကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ဘာလုပ်ကြမလဲ?
Mar 13, 2015 TZO
ကျောင်းတွေပိတ်တော့မည်။ မကြာမီ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကြီးပြီးပါက အခြေခံပညာကျောင်းအားလုံး ပိတ်ပြီ။ ကိုးတန်းစာမေးပွဲ နောက်ဆုံးနေ့မှာ သမီးကို ကျောင်းသွားကြိုတော့ စာမေးပွဲဖြေပြီး ထွက်လာတဲ့သမီးကပြောသည်။ “ဒက်ဒီရယ် ၊ ကျောင်းပိတ်တာ ကလည်း ခြောက်ကပ်ကပ်နဲ့ ပျင်းစရာကြီး”လို့ ဆိုသည်။ အဲဒီနောက်ဆုံးနေ့က ကျောင်းသားတွေပါလာသမျှ ရေဗူးအားလုံးကို ဆရာမတွေက သိမ်းလိုက်သည်။ နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်၍ ကျောင်းသားတွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ရေပက်ကြမှာဖြစ်သဖြင့် စာသင်ခန်းတွေထဲတွင် ရေတွေရွှဲစိုပြီး ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်သည်ထင်ပါသည်။ နောက်ပြီးတော့ အရင်နေ့တွေက အချိန် စေ့မှ ကျောင်းသားတွေ ထွက်ရသော်လည်း အဲဒီနေ့ကတော့ စာမေးပွဲဖြေပြီး၍ စောထွက်ချင်သော ကျောင်းသားများကို နာရီဝက် လောက်အလိုကတည်းက စောပြီးလွှတ်ပေးလိုက်သည်။
လူရှင်းလိုက်သော သဘောဖြစ်မည်။ သမီးတို့သူငယ်ချင်း တစ်သိုက်တောင် ၁၅ မိနစ်ခန့် စောပြီးထွက်လာကြသည်။ ကျောင်းရှေ့ မှာတော့ အပြင်ကျူရှင်တွေ ၊ ဘော်ဒါတွေ ၊ စာသင်ဝိုင်းတွေ ၊ ပုဂ္ဂလိက အထက်တန်းကျောင်းတွေရဲ့ ကြော်ငြာလက်ကမ်း စာစောင်တွေ ဝေနေကြသည်။ သူတို့ကလည်း ပညာရေး ဈေးကွက်တစ်ခုပေါ့။ သမီးလည်း အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးတော့ ဆယ်တန်းကို ဘယ်ကျူရှင်တက်ရရင် ကောင်းမလဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တိုင်ပင်ရင်း ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတာ တွေ့ရသည်။
အခြေခံပညာ မပြီးဆုံးသေးသည့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအနေဖြင့် ခေတ်၏လိုအပ်ချက်အရ နောက်တက်ရမည့် အတန်း အတွက် နွေရာသီကျူရှင်များကို တက်ရင်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြရသည်။ နွေရာသီကျူရှင်တွေကလည်း ဒီနေရာမှာ သူ့ထက်ငါ အပြိုင်အဆိုင် ကြော်ငြာကောင်းကောင်းဖြင့် စာစောင်တွေ ဂျာနယ်တွေ၊ သတင်းစာတွေ အပြင် တချို့ကလည်း တီဗွီမှာပါ ဝေဝေ ဆာဆာကြော်ငြာကြသည်။
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေအနေဖြင့် ရွေးချယ်တက်ကြပေတော့။ တချို့ကလေးတွေကတော့ ကျူရှင်အပြင် အချိန်ရရင် ရသလို တတ်နိုင်ရင်လည်း တတ်နိုင်သလို အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်း ၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်းစသဖြင့် ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိမယ့် သင်တန်းတစ်ခုခုကို လိုက်တက်ကြတာလည်းရှိသည်။
တကယ်တော့ နွေကျောင်းပိတ်ရက်ဟာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအဖို့ စာသင်နှစ်တစ်နှစ်လုံး ထမ်းလာခဲ့ရတဲ့ သင်ခန်းစာ ဝန်ထုပ် ဝန်ပိုးများမှ လွတ်ကင်းသွားပြီဖြစ်လို့ အတော်ပင် လွတ်လပ်ပေါ့ပါး နေကြရမည့် အချိန်ကာလတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါမည်။ သို့ရာတွင် စောစောကဆိုခဲ့သလိုပဲ ယနေ့ခေတ် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများဟာ ကျောင်းပိတ်ရက်ဆို၍ပင် အနားမရရှာကြပါ။ ကျောင်းပြီးလျှင်ကျူရှင် ၊ ကျူရှင်ပြီးလျှင် ကျောင်းဆိုသလို ဖြစ်နေကြပါသည်။ သည့်အတွက် ကျောင်းသားကျောင်းသူ လူငယ် တွေအဖို့ ဦးနှောက်အနားပေးချိန်ပင် မရဟု ဆိုရပေမည်။
သို့ပေမယ့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအားလုံးချည်း ထို့အတိုင်း ရှိမည်ဟုတော့ အသေအချာမပြောနိုင်ပေ။ မိမိမြို့ထဲသွားရန် ကိစ္စ ရှိသဖြင့် လမ်းထိပ်ရှိ ကားမှတ်တိုင်သို့ ထွက်လာရင်း အိမ်နားကလေးမလေး တစ်ယောက်ကို တွေ့သဖြင့် မေးမြန်းနှုတ်ဆက် ရာတွင် ကွန်ပျူတာသင်တန်း သွားတက်မည်ဟု ဆိုပါသည်။ သို့ကလိုပင် မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နွေကျောင်းပိတ်ရက်၌ သန်ရာ သန်ရာ ဝါသနာအလျောက် ပန်းချီသင်တန်း တက်ရောက်သူ၊ ဂီတသင်တန်းတက်ရောက်သူ ၊ ရေကူးသင်တန်းတက်ရောက်သူ စသဖြင့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ လူငယ်များဟာ နွေကျောင်းပိတ်ရက်ကို ကောင်းမွန်အကျိုးရှိစွာ အသုံးချလျှက်ရှိနေကြတာကို တွေ့နေရပါတယ်။
အခုလို နွေဦးပေါက်ချိန်မှာ နွေကျောင်းပိတ်ရက်ကို ပစ်မှတ်ထားပြီး နွေရာသီရေကူးသင်တန်း ၊ နွေရာသီ အင်္ဂလိပ်စကားပြော သင်တန်း ၊ နွေရာသီကွန်ပျူတာသင်တန်း ၊ နွေရာသီပန်းချီသင်တန်း စသဖြင့် အပြိုင်အဆိုင် ကြော်ငြာလာကြတဲ့ နွေရာသီ သင်တန်းတွေရှိသလို တချို့ကလည်း ကိုယ်ခံပညာသင်တန်းတွေဖြစ်တဲ့ တိုက်ကွမ်ဒိုတို့ ကရာတေးဒိုတို့ စတဲ့သင်တန်းတွေကို တက်ကြတယ်။ လူငယ်လူရွယ် ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင် ထိုသို့သော သင်တန်းများကို လေ့လာလိုက်စား သင်ယူထားခြင်းဖြင့် အသက်အရွယ်အလိုက် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး အဆင့်မြင့်တက်မှုကို ဖြစ်စေရုံသာမက ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာများ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အထောက်အကူပြုစေတဲ့အပြင် စွဲမြဲတဲ့အလေ့အကျင့်နဲ့ ခိုင်မာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချတတ်မှု တို့ အတွက်ပါ အထောက်အပံ့ကောင်းများ ရရှိစေနိုင်တာ တွေ့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒီလိုမဟုတ်တောင် အနည်းဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ စိတ်လေလွင့်မှုကို ထိန်းသိမ်းပြီးသား ရောက်တဲ့အပြင် အပျင်းပြေစေနိုင် သည့် အနည်းဆုံးအကျိုးတရားကို ရရှိစေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
ရှင်းရှင်းပြောရလျှင် ထိုအရွယ်လူငယ်များကို မဆိုထားနှင့် လူလတ်ပိုင်း လူကြီးပိုင်းများပင်လျှင် အလုပ်မရှိ စိတ်အားလူအား ဖြစ်နေလျှင် ဟိုဟာလုပ်ချင်သလိုလို ဒီဟာလုပ်ချင်သလိုလို စိတ်က လေနေတတ်သည်။ လူငယ်လူ ရွယ်များက ပိုဆိုးသည်ပေါ့။ မကောင်းသည့်ဘက်ကို စိတ်ကရောက်သွားလျှင်အခက်။ အခုပဲကြည့်လေ တချို့လူငယ်တွေ မကောင်းတဲ့ဘက်လို့ မပြောနိုင် သော်လည်း အင်တာနက်ဆိုင်မှာ လေးနာရီ ငါးနာရီကြာအောင် အချိန်ဖြုန်းကြတာတော့ မဖြစ်သင့်ပါ။ Facebook သုံးလို့ Chatting ထိုင်လို့ ၊ Game ကစားလို့ဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလို အချိန်အကြာကြီး မနေသင့်ပါ။ မိမိစာမူကို e.mail ပို့ရန် အင်တာနက် ဆိုင်ရောက်သည့်အခါ ကောင်တာတွင် ပိုက်ဆံလာရှင်းကြတာ တစ်ထောင်ကျော်ရှင်းကြတာ တွေ့ရသည်။
တကယ်ဆို အလွန်ဆုံး တစ်နာရီ နှစ်နာရီသာ သုံးသင့်သည်။ ရုံးသမားအနေနှင့် သူ့တာဝန်အရ ကွန်ပျူတာကို တစ်နေကုန်သုံးရင် သုံးရမည်။ ကိုယ်ကအဲဒီလို သုံးဖို့မလိုပါ။ အညောင်းမိသည်။ မျက်စေ့ထိခိုက်နိုင်သည်။ ကြာရှည်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မည်။ ဒါ့ကြောင့် အခြား အားကစားတစ်ခုခုကိုလည်း အချိန်မျှပြီး လုပ်သင့်သည်။ စက်ဘီးစီးတာ ၊ ပြေးတာ ၊ လမ်းလျှောက်တာ တစ်ခုခုပေါ့။
နောက်တစ်ခုကလည်း သည်နေ့ခေတ်မှာ ကျောင်းစာပြီးကျောင်းစာ လုပ်နေရတဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေအတွက် အခြားသော အသိပညာ ဗဟုသုတများကို ရှာဖွေစူးစမ်းချိန်မရဖြစ်ကာ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အရွယ်မှာ သိသင့်သိရမည့် အသိပညာဗဟုသုတများ နည်းပါးပြီး ကြီးပြင်းလာကြရရာ အရွယ်ရောက်၍ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်မည့် အချိန်တွင် လူတွေ့မေးမြန်းမှုများ၏ အထွေထွေဗဟုသုတ မေးခွန်းများ မဖြေနိုင်ကြတာကိုလည်း ကြုံတွေ့ကြရပါ သည်။ ယင်းအချက်ဟာလည်း မိမိတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်တွေအပေါ် မသိမသာ လှိုက်စားလာနေသည့် အချက်ကြီးတစ်ရပ် ဖြစ်လာနေတာကိုလည်း တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါ့ကြောင့် ဒီပြဿနာကို စနစ်တကျ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်မှာ လူငယ်လူရွယ်များကို ကျောင်းစာပြီးကျောင်းစာ မဖြစ်စေဘဲ အရွယ်အလျောက် သိသင့်သိထိုက်သော တတ်သင့်တတ်ထိုက်သော အသိပညာ ဗဟုသုတများ ကြွယ်ဝနေစေရေး ၄င်းတို့ သန်ရာသန်ရာကို ရွေးချယ်ကာ ပြုစုပျိုးထောင် သင်ကြားစေသင့်ပါသည်။
အဓိကအားဖြင့် အခြေခံပညာ မပြီးဆုံးသေးတဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအနေနဲ့ နောက်တက်မယ့် အတန်းအတွက် ယခုလို နွေရာသီမှာ သင်ခန်းစာများ ကြိုတင်သင်ကြားကြရသလို အချိန်ရရင်လည်း ဖြစ်နိုင်ရင် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း ၊ ကွန်ပျူတာ သင်တန်း (မူလတန်းကလေးများပါ သင်နိုင်သည်) စသဖြင့် တစ်ခုခုကို တက်ရောက် သင်ကြားသင့်ပါသည်။ ဆယ်တန်းဖြေ ထားပြီးသူများအနေဖြင့်လည်း ဖြေဆိုနိုင်တာ ၊ မဖြေဆိုနိုင်တာ အပထား အောင်စာရင်းထွက်ပြီး ကျောင်းပြန်မတက်ရမီ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် လမ်းညွှန်တွေမထွက်ခင် စာရင်းကိုင် သင်တန်းပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်းပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ အင်္ဂလိပ် ၊ တရုတ် ၊ ကိုရီးယား ၊ ဂျပန်စတဲ့ စကားပြော သင်တန်းတစ်ခုခုကိုဖြစ်ဖြစ် တက်သင့်ကြပါတယ်။
အဓိက အကြံပြုချင်တာကတော့ ဖော်ပြပါ ကျောင်းသားလူငယ်များဟာ စာမေးပွဲဖြေပြီးပြီးချင်း ကျောင်းပိတ် ပြီးပြီးချင်း ဖော်ပြပါ ကျူရှင်တွေ သင်တန်းတွေ မတက်သေးဘဲ အပန်းဖြေခရီး တစ်ခုခုထွက်နိုင်ရင် ထွက်သင့်ပါတယ်။ ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေဖြစ်တဲ့ ချောင်းသာတို့ ၊ ငွေဆောင်တို့ ၊ ငပလီ ၊ ကျိုက္ခမီစက်စဲ စတာတွေ တောင်ပေါ်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ တောင်ကြီး ၊ အင်းလေး၊ ပင်းတယ ၊ ကလော ၊ အောင်ပန်း ၊ ပြင်ဦးလွင် စတဲ့နေရာတွေကို သွားသင့်ပါတယ်။ ပုဂံညောင်ဦး ဘုရားဖူးခရီးကတော့ အခုလို ပူတဲ့ရာသီ မှာ မသွားသင့်ပါ။ အပန်းဖြေခရီးမဟုတ်ဘဲ အပူဒဏ်ကြောင့် လူကိုပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေပါတယ်။ ဒီလိုရာသီက အညာဒေသကို မသွားသင့်တဲ့အချိန်ပါ။ ကိုယ်တွေ့မို့လို့ပါ။ ဘုရားဖူးလုပ်ငန်းတွေက ကိုယ့်ကိုမေတ္တာပို့တော့မယ်။ ကိုယ်တွေကတော့ လိပ်ဥလည်း တူးရင်း ဘုရားလည်း ဖူးရင်းသွားခဲ့တာ၊ (တမင်သကာ ပြောင်းပြန်ပြောတာ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကိုယ်တွေက အလုပ်ကိစ္စ သွားရင်းနဲ့ ပုဂံဘုရားတွေကို ဝင်လှည့်ဖူးခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။) နေ့ပူညချမ်းဆိုတဲ့ စာဆိုနဲ့အညီ ဖြစ်နေလို့ ဘုရားတွေတစ်ဆူနဲ့ တစ်ဆူကို ခပ်သုတ်သုတ်ပဲ ဖူးခဲ့ရသည်။
စောစောကပြောခဲ့သလိုပဲ ပင်လယ်ကမ်းခြေတို့ တောင်ပေါ်ဒေသတို့ မသွားနိုင်ရင်တောင် ရန်ကုန်မြို့နဲ့ မနီး မဝေးဖြစ်တဲ့ ညောင်ချောင်းသာတို့ ၊ ပဲခူးဘုရားဖူးတို့ ၊ လှော်ကားတို့ ၊ ရန်ကုန်မြို့တွင်းဖြစ်တဲ့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်တို့ ပြည်သူ့ဥယျာဉ်တို့ ၊ ကန်တော်ကြီး ကရဝိတ်ဥယျာဉ် ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်စသည်တို့ကို လည်ပတ်ပြီးအပန်းဖြေလိုက် ပါ။ မနားတမ်းရယ်မောရမည့် ဟာသရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို ရုပ်ရှင်ရုံမှာ သွားကြည့်ပါ။ ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ကြည့်ရတာက ရယ်စရာရှိရင် တစ်ရုံလုံးက ပရိသတ်တွေ နဲ့အတူ အားရပါးရ ရယ်ရတာက ပိုပြီးအရသာရှိပါသည်။ (သနားစရာ ကောင်းတယ် ၊ ကြောက်စရာကောင်းတယ် ၊ ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်း ဒီလိုပါပဲ) ကဲ အဲဒီလိုနားပြီး ကြပြီ ၊ အပန်းဖြေပြီးကြပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ ကိုယ်နဲ့ သင့်တော် မယ်ထင်တဲ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေလည်း တက်မယ့် ကျူရှင်တို့ သင်တန်းတို့ကို စုံစမ်းပြီးတက်ကြမည်။ ကျူရှင်တစ်ခု ပြီးတစ်ခု ပြောင်းတက်ရတာမျိုး မဖြစ်စေဘဲ အစကတည်းက တစ်ခါတည်း စာသင်နှစ်တစ်နှစ်လုံး တောက်လျှောက်တက်သွား နိုင်မည့် သင်တန်းမျိုးကို ရွေးချယ်မိဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မည်။
သင်တန်းတွေကတော့ သူတို့ကြော်ငြာတွေအရ ဒီလထဲမှာပဲ စကြမည်။ သို့သော်လည်း ကျောင်းသား အများစုဟာ ဧပြီလဆန်း ဒါမှမဟုတ် သင်္ကြန်အပြီးလောက်မှ တက်ကြမည်ဟု သိရသည်။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာလုံး ပုခုံးပေါ် ထမ်းထားခဲ့ရတဲ့ သင်ခန်းစာဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီး ကျရုံရှိသေးသည်။ သူတို့ ဒီလောက်တော့ နားဦးမှာပေါ့။ သမီးလည်း ၄ လပိုင်း ၉ ရက်နေ့ဖွင့်မည့် သင်တန်း တစ်ခုကို ရွေးလိုက်သည်။ အိမ်နဲ့ ကျောင်းနဲ့လည်း မနီးမဝေး သွားရေးလာရေးလည်း လွယ်ကူပြီး ဒီအရပ်မှာ နာမည်လည်း အသင့်အတင့်ရှိတဲ့ သင်တန်းဖြစ်သည်။ သမီးရဲ့သူငယ်ချင်းတွေလည်း တက်ကြမည်ဆိုတော့ အဆင်ပြေ သွားသည်ပေါ့။ ကိုယ်တွေရဲ့ မိဘတာဝန်ပဲ ကျန်တော့သည်။
ကျွေးမွေးမပျက် ၊ ဆောင်ရွက်စီမံ ၊ မွေခံထိုက်စေ ၊ ပေးဝေနှီးရင်း ၊ ထိမ်းမြားခြင်းလျှင် ဝတ်ငါးအင် ဖခင်မယ်တို့တာ ဆိုသလိုပဲ။ ပညာအမွေကတော့ ဘယ်တော့မှ မပျောက်ပျက်နိုင်တဲ့အရာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သားသမီးတွေကို ပညာအမွေပေးနိုင်ဖို့က အရေးကြီး ပါသည်။ သားသမီးတွေကလည်း ပညာအမွေကို ယူတတ်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် ကျောင်းပိတ်ရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ စဉ်းစား နေကြတဲ့ ကျောင်းသားလူရွယ် သားငယ်သမီးငယ် တို့လည်း ရှေ့ကရေးခဲ့တဲ့အတိုင်း ကိုယ်နဲ့သင့်တော်ရာ သင်တန်းတစ်ခုခုကို ရွေးချယ်တက်ရင်း အချိန်ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်။
Asus NB New Product, ASUS K455LD-WX081D (Brown)